Gịnị bụ IP telephony na otú ọ pụrụ isi nyere gị azụmahịa | e-azụmahịa ozi
Maka azụmahịa, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa n'ịntanetị ..., nkwurịta okwu na ndị ahịa dị mkpa. Ọbụna ịbụ eCommerce, inwe njikọ na ndị ahịa, ma ọ bụ opekata mpe ikwe ya, na-eme ka ha nwekwuo nchebe na ịzụrụ ihe. Ma mgbe ị na-achọ ọnụego na nhọrọ, la Igwefoto IP ọ na-aghọwanye ihe dị mkpa na niche mara mma.
Mana gịnị bụ telephony IP? Kedu ihe ọ bụ? Kedu ihe kpatara eji akwado ya na ụlọ ọrụ? Anyị ga-ekwu maka ya n'okpuru.
1 Gịnị bụ IP telephony
1.1 Ọdịiche dị n'etiti telephony IP na ụdị ịkpọ oku na ịntanetị
2 Ka ekwentị IP si arụ ọrụ
3 Uru na ọghọm dị na telephony IP
3.1 Kedu uru ọ nwere
3.2 Kedu ihe ọghọm ọ nwere?
4 Ekwentị IP ọ bara uru maka ụlọ ọrụ?
Gịnị bụ IP telephony
Ugbu a, telephony IP aghọwo otu n'ime ụdị nkwurịta okwu kachasị mma maka ụlọ ọrụ, nke nwere ike iji nhọrọ a dochie ahịrị ekwentị ọdịnala.
Kpọtụrụ, Ọ bụ teknụzụ na-enye anyị ohere iji ekwentị na-ekwurịta okwu site na ịntanetị. Ọmụmatụ nke a bụ oku anyị na-akpọ, ma ọ bụ akpọre anyị, site na WhatsApp, Zoom, Skype...
Aha ọzọ e ji mara telephony IP bụ Internet Telephony Protocol. Ha na-eji teknụzụ VoIP, ebe a na-agbanwe olu ka ọ bụrụ data ezigara onye nke ọzọ site na ịntanetị. Tupu ịnata ya, ọ na-aghọ olu ọzọ, nke a na-anụ. Na ihe a niile n'ime nkeji nkeji.
Ọdịiche dị n'etiti telephony IP na ụdị ịkpọ oku na ịntanetị
Dị ka anyị gwara gị na mbụ, telephony IP nwere ike ịdị ka oku Skype, WhatsApp ... Otú ọ dị, n'eziokwu ọ bụghị otú ahụ.
Otu na ndị ọzọ dị nnọọ iche. Ma ọ bụ ya Oku ekwentị oge niile n'etiti mmadụ abụọ chọrọ ka ha abụọ nwee otu ngwa, ebe ọ bụ na ma ọ bụghị ya enweghị ike ime ya. Na na IP telephony ọ dịghị mkpa. N'ezie, ihe ha na-eme bụ ịnweta nọmba echekwara na ígwé ojii (ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke ha nwere) ka ha nwee ike ịkpọ na / ma ọ bụ nata oku na-enweghị otu ngwa, ma ọ bụ dabere n'ụdị ekwentị ejiri.
Ka ekwentị IP si arụ ọrụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ntakịrị banyere ka teknụzụ a si arụ ọrụ, ị kwesịrị ịma nke ahụ Ha na-eji protocol IP. A na-agbanwe mgbama olu ka ọ bụrụ ngwugwu data nke na-ahapụ netwọk mpaghara a na-akpọ LAN, ma ọ bụ ozugbo site na Ịntanetị (nke ga-abụ olu karịa IP). Nke a na-eru onye nke ọzọ aka wee gbanwee azụ ka ọ bụrụ olu, nke bụ ihe onye ahụ na-anụ. Agbanyeghị, nke a, nke enwere ike iche na ọ ga-emetụta nkwukọrịta n'ihi na ị ga-echere, ọbụlagodi sekọnd ole na ole, na-eme ngwa ngwa.
N'ezie, ị ghaghi iburu n'uche nke ahụ Ekwentị IP abụghị n'efu. Dị ka nke "nkịtị", ebe a kwa enwere ụgwọ njikọ n'etiti ndị na-arụ ọrụ, dị ala, mana ha dị. N'ozuzu, na Spain ọnụ ahịa dị ntakịrị, ma ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị na-akpọ ebe ndị ọzọ, oku nwere ike ịdị oke ọnụ.
Uru na ọghọm dị na telephony IP
Ọ bụ eziokwu na telephony IP, gwara dị ka anyị mere, nwere ike iyi ihe kacha mma maka ụlọ ọrụ, ebe ọ bụ na-echekwa ọnụ ahịa ma na-akwalitekwa nrụpụta na nzikọrịta ozi n'akụkụ niile nke ụwa. Ma ihe niile "dị mma" nwekwara akụkụ ọjọọ.
Ya mere, tupu ịhọrọ ya, ị kwesịrị ịma ihe uru na ọghọm dị.
Kedu uru ọ nwere
Na mgbakwunye na ndị ahụ anyị kwurula, uru ndị ọzọ nke telephony IP bụ:
Ekwe omume na ha nwere ike zaa ọtụtụ oku n'otu oge. N'ezie, nke a na-egbochi ndị ọrụ ịchere na ekwentị a ga-aga.
Njirimara ndị ọzọ, dị ka ekele ahaziri ahazi, nhazi oge, ndekọ oku, ọnụ ọgụgụ...
Nye ihe onyonyo nke mba ụwa, n'ihi na ọ nweghị onye ga-amata n'ezie ma ị na-eji nọmba mebere ma ọ bụ na ọ bụghị, njikọ ndị ahụ dịkwa ike ugbu a nke na ha ebipụghị ma ọ bụ nwee ụda ọjọọ, wdg.
Ị nwere ike jiri akara ala site na mkpanaka, zaa oku na-aga na-ebufe oku.
Kedu ihe ọghọm ọ nwere?
Dị ka anyị kwuru, ewezuga uru, enwerekwa ụfọdụ adịghị ike nke a ga-eburu n'uche tupu ịme mkpebi ahụ. Kpọtụrụ:
Ogo nke oku, nke, ọ bụ ezie na ha na-agbanwe nke ọma na mma. Agbanyeghị, ị kwesịrị ịma na enwere ike ịnwe nkwụsịtụ, igbu oge, olu ọla...
Ị nweghị ike iji ya ma ọ bụrụ na ịnweghị ngwaọrụ pụrụ iche. Ọ bụ ezie na ọ dị oke ọnụ, itinye ego na ya na-enye gị ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị kwụsịrị, ekwentị IP gị agaghị arụ ọrụ. Otu ihe ahụ ga-eme ma ọ bụrụ na ịntanetị agwụla gị. Maka nkwụsị ọkụ, iji batrị na-adịru ogologo oge ọ na-adị nwere ike ịbụ ihe ngwọta, ma n'ihe gbasara ịntanetị, ị ga-enwe nhọrọ ọzọ dị ka njikọ ekwentị na mkpanaka wee tụgharịa oku na ya, ma ọ bụ ọbụna jiri ọrụ Google mepụtara nke a na-akpọ WebRTC, nke na-enye ohere ka ibugharị oku mgbe ọkụ na-adịghị.
Ekwentị IP ọ bara uru maka ụlọ ọrụ?
O kwere omume na, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị dị obere, ma ọ bụ na ị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke ị nwere ike ijikwa ngwa ngwa, echiche a anaghị amasị gị nke ukwuu n'ihi na ị naghị enweta oku, ndị ị na-enweta dị mfe ịza gị.
Otú ọ dị, mgbe ọ na-amalite na-eto eto ma na-enwekwu mmekọrịta na nkwurịta okwu na ndị ahịa, ihe na-agbanwe. N'okwu a, Ekwentị IP na-enye gị ụzọ iji jeere ndị ahịa ozi n'ụzọ dị irè karị. Ọ bụghị naanị na ị na-ezere ichere, mana ị na-emeziwanye nzikọrịta ozi ahụ site n'ịdị adị na-enweghị ịmara ekwentị mgbe niile, mana ị nwere ike ịga na kọmputa gị ma ọ bụ site na sistemụ ọzọ.
Ọzọkwa, otu n'ime egwu nke ọtụtụ ndị ọchụnta ego bụ na ndị mmadụ nwere ike inwe nsogbu nkwurịta okwu, ma nke a dị mfe iji dozie njikọ dị mma. Y ọ dịghị onye ga-amara na ekwentị ha na-akpọ abụghị ekwentị “nkịtị” kama ọ dị n'igwe ojii. Ị nwere ike ịnwe ọtụtụ nọmba ekwentị na-enweghị nnukwu ego na njedebe nke ọnwa.
Mkpebi dị n'aka gị, mana ọ nwere ike ịbụ ihe ngwọta ị na-achọ maka azụmahịa gị yana ọtụtụ ndị mmadụ na-ekpebi itinye ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu ihe bụ telephony IP na kedu ka ọ ga-esi nyere azụmahịa gị aka?
Gịnị na-atụtụ na nkwakọ